Pin barika hatsiaka Feed fingotra Extruder Machine - China Qingdao milina tapaka
Pin barika hatsiaka Feed fingotra Extruder Machine
PIN-barika mangatsiaka FEED fingotra EXTRUDER 1 Different extrusion loha extrude samihafa ampiharina amin'ny antsasaky ny vita fingotra products.Available amin'ny Laoniny lohany, hanitsaka ny lohany, Cross lohany, Strip Extrusion lohany sy Strainer lohany. 2 Ny barika dia ahitana faritra maro. Ao amin'ny sakafo zong, ny miolakolaka slots miasa miaraka amin'ny lafiny horonana mba hanatsarana mamahana fahaizany. Ao amin'ny plastication sy extrusion faritra, samy hafa maro Pins dia fitted.The barika dia avy amin'ny roa sosona rafitra vy, ary noloahany circumferenti ...
Port: Qingdao, CNF, CIF dia nankasitraka an'i
PIN-barika mangatsiaka FEED fingotra EXTRUDER
1 Tsy mitovy extrusion loha extrude samihafa ampiharina amin'ny antsasaky ny vita fingotra products.Available amin'ny Laoniny lohany, hanitsaka ny lohany, Cross lohany, Strip Extrusion lohany sy Strainer lohany.
2 Ny barika dia ahitana faritra maro. Ao amin'ny sakafo zong, ny miolakolaka slots miasa miaraka amin'ny lafiny horonana mba hanatsarana mamahana fahaizany. Ao amin'ny plastication sy extrusion faritra, samy hafa maro Pins dia fitted.The barika dia avy amin'ny roa sosona rafitra vy, ary noloahany circumferentially.
3 Ny visy fitaovana mandany 38CrMOALA firaka vy, rehefa avy quenching sy tempering, mamolavola, hatsaran'ny, fametrahana mazava tsara Fitotoana Vary, surface nitriding dipoavatra bimetal, Nikosokosoka, sns, ny endri-javatra ny fametrahana mazava tsara avo, avo harafesiny fisorohana, anaovan'ireo avo mahatohitra. Ny service visy fiainana avo roa heny ela.
Ny ara-nofo dia: 38CrMOALA
Tezitra Degree : HB240 ° ~ 280 °
Nitriding hamafin'ny : HV850 ° ~ 1000 °
Ambony fahombiazana : Ra0.4
Sokiro Straightness : 0.015mm
Hard Chrome voapetaka taorian'ny Nitriding : ≥900HV
Chrome hateviny : 0,05 ~ 0.10mm
Dingana roa-Alloys : HRC56 ° ~ 65 ° ( nikela-base firaka )
Firaka Deepness : 1.5 ~ 2.0mm
4 Ary ny Gears ao amin'ny reducer dia vita amin'ny firaka vy, ny nify dia tena mafy.
Gearbox amin'ny hollow Output lavaka ho an'ny visy hihena na Rotary Joint.
5 Heating ary hihena rafitra: maty heater (bobongolo controler mari-pana).
6 Constant Speed na Variable hafainganam-pandeha toy ny isan-fiara fepetra manokana.
Motor: matetika hafainganam-pandeha na ny fanaraha-maso ny maotera DC maotera.
7 Ary ny tombony ny milina dia ahitana vokatra tsara kokoa plastication, extrusion fahaizany ambony, ambany ny mari-pana ny fingotra sariaka sady mandimandina asa, mora fandidiana sy ny fikojakojana.
8 Tena be ampiasaina amin'ny extruding Hose fingotra, fantsona fingotra, fingotra taratasy, anaty Liner, tombo-kase, tariby câble, tranony, handia reraka, reraka lafiny manda, ampiasaina ihany koa mba hanome ho an'ny kely fingotra calender habeny.
Masontsivana ara-teknika ny tena modely:
Sokiro dia MG 90 120 150 200 250
L / D Taham 12-14 12-14 16 12-18 12-18
Max.Screw hafainganam-pandeha R / min 60 55 45 33 26
Hopper MG 130 * 100 164 * 130 220 * 130 260 * 180 310 * 220
Andalana Qty ny Pin 8 10 10 12 12
Pin Qty ny isan-toerana 6 6 8 10 12
Herin'aratra 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ
hery KW 75 90 220 220-355 355-480
Zone ny fikorianan'ny rano mafana 4 4 4 4 4
fahafahana Kg / h 250-360 600-900 1000-1500 1600-2600 ~ 3000
amin'ny ankapobeny lafiny L MG 2570 3010 4000 7250 7980
W MG 1335 1320 1810 2100 2400
H MG 1500 1855 1620 2035 2090
About lanja T ~ 4.5 ~ 6 ~ 7,25 ~ 12 ~ 17
Raha toa ka manana ny fepetra manokana, Aza misalasala mifandray aminay. Koa izahay ampanjifaina milina toy ny isan-ny mila fanampiana manokana.
Previous: C Type fingotra nanasitrana Press Machine
Manaraka: Hot Feed fingotra Extruding Machine
mangatsiaka fingotra extruder
fingotra extruder milina
kodiarana fingotra extruder
Fingotra Filter Strainer Extruder Machine
Bala fingotra Granule Extruder-dalana,
BMC Unsaturated Glass Fibre Resin Mol tsindrona ...
PVC Steel Wire nanamafy Hose Extruding-dalana,
Small hydraulic fingotra Vulcanizer Machine